Seagram Myanmar Sales Academy - Level 1 | EdApp: The Mobile LMS
Seagram Myanmar Sales Academy - Level 1 course content
Why do we need to know about company and products? အပြန်အလှန်လေးစားမှုကို တည်ဆောက်ရန် Customer နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း မိမိကုန်ပစ္စည်းကို မိတ်ဆက်ခြင်း မိမိထုတ်ကုန်များ အရည်အသွေးကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရှိစေရန် အထက်ပါအချက်များကို သိခြင်းအားဖြင့် မိမိလုပ်ငန်း၏အ‌ကြောင်းကို သိရှိသည့်အရာင်းသမားကောင်းဖြစ်လာကာ ဆိုင်များ၏ ယုံကြည်မှုကိုလည်း ရလာစေရန် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်း
Seagram’s High Class Imperial Blue 100 Pipers ဘာနဲ့ ပြုလုပ်ထားသလဲ 1 . မြန်မာ့ အကောင်းဆုံး အစေ့အဆန်မှ ထုတ်လုပ်ထားသော အရက်နှင့်၊ အမေရိကန် ၀က်သစ်ချ စည်တွင် စိမ်ထားသော သက်တမ်းရင့် ၀ီစကီတို့ကို အချိုးကျစွာ ပေါင်းစပ်ထားသော ၀ီစကီ ဖြစ်သည်။ 1 .စကော့တလန်မှ မုယော နှင့် ပြည်တွင်းထွက် အကောင်းဆုံး အစေ့အဆန်များ တို့ကို အချိုးကျ ရောစပ်ကာ အမေရိကန် ၀က်သစ်ချစည်တွင် နှစ်ရှည် စိမ်ထားသော သက်တမ်းရင့် ၀ီစကီ ဖြစ်သည်။ 1 . စကော့တလန်မှ ချက်လုပ်ထားသော သက်တမ်းရင့် စကော့ ၀ီစကီစစ်စစ်ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့် ရွှေရောင် ပရီမီယံ ဒီဇိုင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော စကော့ ၀ီစကီ ဖြစ်သည်၊ နိုင်ငံတကာမှာ ဘယ်လို အခြေအနေ ရှိသလဲ ဂုဏ်စရာ House of Seagram အုပ်စု၀င် နိုင်ငံတကာ အရသာနှင့် အရည်အသွေးမြှင့် မြန်မာ ၀ီစကီ ကမ္ဘာ့ နံပါတ် ၃ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး ၀ီစကီ အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်။ (နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံတွင် ဖြန်ချီနေသော နိုင်ငံတကာ အမှတ်တံဆိပ် ၀ီစကီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၈/၁၉ တွင် ပါကင်ပေါင်း သိန်း ၂၅၀ ရောင်းခဲ့ရပါသည်) အာရှတိုက်တစ်တိုက်လုံး၏ နံပါတ် ၂ ရောင်းအား အကောင်းဆုံး ၀ီစကီ ဖြစ်သည်။ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၂၅ နိုင်ငံတွင် ဖြန့်ချိနေသော ၀ီစကီ ဖြစ်သည်။ ဘယ်အရာတွေက အတု မလုပ်နိုင်တာလဲ3. Seagram High Class ကို .Chivas Brothers မှ နှစ် ၄၀ ကျော် ဖျော်စပ်မှု အတွေ့အကြုံ ရှိသော စကော့တလန် Master Blender Willian Henderson ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ပုလင်းပေါ်တွင် ၄င်း ၏ လက်မှတ် ပါရှိပါသည်။ Mono Box, Guala Cap for (700ml) and Tear Cap for 350ml,175ml. အတုပြုလုပ်၍ မရသော Temper Proof (ဂွာလာကတ်) ပါရှိကာ အဖုံးအောက်တွင် ပလပ်စတစ် လုံခြုံရေး ကွင်း ( Security Plastic Loop) ပါရှိသည်။ မိမိ ကုန်ပစ္စည်းအ‌ကြောင်းကို အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်ရန် အနှစ်ချုပ် ဇယား
Seagram’s High Class Imperial Blue 100 Pipers 4. ထုတ်ကုန်ကနေ ဘာ အာမခံချက်တွေရှိသလဲ 4. နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အချိုးကျစွာ ရောစပ် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် မနက်တွင် လန်းဆန်းစွာ နိုးထစေပြီး ခေါင်းကိုက်မှု မရှိပါ။ 4. အရောင်တု အနံတုများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း မရှိပဲ သဘာ၀အတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ခေါင်းမကိုက်ပဲ မနက်ခင်းတွင် ကြည်လင် လန်းဆန်းစွာ နိုးထစေပါသည်။ 4. မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရား၀င်ဖြန့်ချိသည် နိုင်ငံတကာ ပုံစံ ဖြင့် စကော့ ၀ီစကီစစ်စစ် ဖြစ်ပြီး အခွန်တံဆိပ်ပါရှိကာ ဆိုင်ရှင်အနေဖြင့် စိတ်ချလက်ချရောင်းချနိုင်ပါသည်။ 5. မိမိထုတ်ကန်များဟာ ဘာကြောင့် အမြတ်ရနိုင်တာလဲ 5. မြန်မာနိုင်ငံရှိ စတန်းဒတ် ၀ီစကီတန်းများထဲတွင် ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတကာ Seagram အမှတ်တံဆိပ် အရည့်အသွေးမြင့် ၀ီစကီဖြစ်ခြင်း စကော့တလန် မာစတာ Blender လက်မှတ် ပါရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဆိုင်ရှင်အနေဖြင့် တခြား ပြိုင်ဘက် ၀ီစကီများထက် ပိုမို ယုံကြည်ကာ ရောင်းချနိုင်ပြီး အမြတ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 5. စူပါ စတန်းဒတ် ၀ီစကီ (အပြာတန်း ၀ီစကီ)များကို ငွေ ၄၀၀၀ကျပ် ၀န်းကျင်ဖြင့် ၀ယ်ယူနေရချိန်တွင် ကမ္ဘာ့ နံပါတ် ၃ စူပါ စတန်းဒတ် ၀ီစကီ ကို ငွေ ၃၅၀၀ နီးပါးဖြင့်သာ ၀ယ်ယူရသောကြောင့် ဆိုင်ရှင်အနေဖြင့် ပြန်လည် ရောင်းချရာတွင် အမြတ်အစွန်း ပိုမို ရရှိနိုင်ပါသည်။ 5. မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရား၀င်ဖြန်ချိထားခြင်း ဖြစ်သည့်အပြင် ပရီမီယံ စကော့ ၀ီစကီစစ်စစ်ကို ငွေတသောင်းနီးပါြဖင့်သာ ၀ယ်ယူရသောကြောင့် ပြန်လည် ရောင်းချရာတွင် ဆိုင်ရှင်အနေဖြင့် အမြတ်အစွန်း ပိုမို ရရှိနိုင်ပါသည်။ မိမိ ကုန်ပစ္စည်းအ‌ကြောင်းကို အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်ရန် အနှစ်ချုပ် ဇယား
Malt Whisky The Glenlivet, (Single Malt whisky)
Seagram Myanmar Sales Academy - Level 1 Course Author